မြန်မာအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ယနေ့စရောက်တော့မယ်…… – Youth Bar
မြန်မာအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ယနေ့စရောက်တော့မယ်……
Breaking News! မြန်မာအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ယနေ့စရောက်တော့မယ်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရောက်တော့မည်။မြန်မာအပါအဝင် ၆ နိုင်ငံသို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများ ပေးပို့ခြင်းအစီအစဉ်ကို ယနေ့စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယက သတင်းထုတ်ပြန်။
India နိုင်ငံ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ မနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာ၊ ဘူတန်၊ နီပေါ၊ မောလ်ဒိုက်၊ Bangladesh နှင့်Seychelles သို့ India ထုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများကို ၂၀.၁.၂၀၂၁ ရက်မှစ၍ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းနောက် အာဖဂန်နစ္စတန်၊ Sri Lanka နှင့် Mauritius နိုင်ငံများသို့လည်း ဆက်လက်ပေးပို့ရန်အစီအစဉ်ရှကြောင်း၊ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ဝေပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံ ၉၀ ကျော်သို့ ဖြန့်ဝေမည့် COVAX အစီအစဉ်အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွမ်းနိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာက India ၏ Serum Institute မှ လူ ၁၅ သန်းစာ Covishield အမည်ရှိ Oxford/AstraZenica ကာကွယ်ဆေးအလုံး သန်း ၃၀ ဝယ်ယူရေးစာချုပ်ကို ၂၄.၁၂. ၂၀ ရက်က ချုပ်ဆို၍ ၅.၁. ၂၀၂၁ ရက်တွင် ကုန်အမှာပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Breaking News! ျမန္မာအတြက္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ယေန႕စေရာက္ေတာ့မယ္
ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ေရာက္ေတာ့မည္။ျမန္မာအပါအဝင္ ၆ နိုင္ငံသို႔ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေပးပို႔ျခင္းအစီအစဥ္ကို ယေန႕စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယက သတင္းထုတ္ျပန္။
India နိုင္ငံ ျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ မေန႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာ၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ ေမာလ္ဒိုက္၊ Bangladesh ႏွင့္Seychelles သို႔ India ထုတ္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ၂၀.၁.၂၀၂၁ ရက္မွစ၍ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ယင္းေနာက္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ Sri Lanka ႏွင့္ Mauritius နိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ဆက္လက္ေပးပို႔ရန္အစီအစဥ္ရွေၾကာင္း၊ကမာၻအႏွံ႕ ျဖန႔္ေဝေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ရာ နိုင္ငံ ၉၀ ေက်ာ္သို႔ ျဖန႔္ေဝမည့္ COVAX အစီအစဥ္အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြမ္းနိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျမန္မာက India ၏ Serum Institute မွ လူ ၁၅ သန္းစာ Covishield အမည္ရွိ Oxford/AstraZenica ကာကြယ္ေဆးအလုံး သန္း ၃၀ ဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ကို ၂၄.၁၂. ၂၀ ရက္က ခ်ဳပ္ဆို၍ ၅.၁. ၂၀၂၁ ရက္တြင္ ကုန္အမွာပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တရားအားထုတ်သူများ မပြောအပ်သောစကား (၃၂) မျိုး (တရားအားထုတ်နေစဥ်)…..